“Ciyaarista la’aanta taageerayaasha waxyaabo badan ayaa isbaddali doona” – Jordi Alba – Gool FM
(Spain) 29 Maajo 2020. Daafaca bidix xulka qaranka Spain iyo kooxda Barcelona ee Jordi Alba ayaa aaminsan in ku soo laabashada tartamada kubadda cagta iyadoo albaabada ay u xiran yihiin oo bilaa taageero ah ay waxbadan badali doonaan.
Tartanka horyaalka La Liga ee dalka Spain ayaa loo qorsheeyay inuu soo laabto 11-ka bisha June ee soo socota, waxaana lagu ciyaari doonaa kulamada ka haray xilli ciyaareedkan wax ka yar bil, maaddaama tartanka uu dhammaanayo 19-ka July.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay Jordi Alba waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waan ogahay waxa aniga iyo asxaabteyda aan sameyn karno, laakiin waa inaan taxadar badan sameynnaa”.
“Dareenka ayaa ah inaan dooneyno inaan ku laabano oo aan ciyaarno, laakiin taageerayaasha la’aantood waxyaabo badan ayaa isbedelaya”.
“Waa in lagu sameeyaa isbadelo qaar kubadda cagta, si loogu hoggaansamo nidaamka caafimaadka iyo amniga”.
“Haddii aad tufto candhuuf, waxaad qaadan kartaa kaar jaale ah, waxaan ku aragnay horyaalka Bundesliga Jarmalka, midba midka kale ma salaamo, ilaa ay si dhib leh u dabaaldegaan”.